Iwe uri Chaizvoizvo mu1% yeLinkedIn? | Martech Zone
Muvhuro, Kukadzi 11, 2013 Svondo, Ndira 15, 2017 Douglas Karr
Numeri. Dzimwe nguva vanondityaira nzungu. Nhasi muenzaniso wakanaka. LinkedIn yakaburitsa email ichikorokotedza nhengo dzayo dzaive mune yepamusoro muzana yemaprofiles akaonekwa. Heino kiyi… ma profiles anoonekwa. Hezvino zvinoita email ... kurumbidzwa kweshamwari Daren Tomey:
Daren akaoma -jaja uye zvachose mune yangu 1% kirabhu yevatengesi vatengesi kutenderera nyika. Ini handisi kuzomubvisira izvozvo. Mubvunzo ndewokuti nei chimiro chaDaren chingave chimwe chepamusoro chinotariswa? Uye ungapinda sei mukirabhu ye1 muzana?
Hafu yeiyo equation iri nyore, imwe hafu yakaoma.
Kutanga, Daren ndiye mutero wekutengesa kuZmags - an digitaalinen kutsikisa chikuva (uye mutengi). Kutengesa kune hutsinye. Shanduko yakakwira uye makambani anogara aripo kutarisa yetarenda. Kiyi pano ndeiyi kutarisa. Kutarisa = maonero. Nekudaro, isa yekutengesa manejimendi kana wekutengesa mukuru muprofita yako uye iwe unozokwira mudenga. Mukati medandemutande wangu, mazhinji epamusoro muzana aive mukutengesa.
Chechipiri, shanda nesimba pakubatanidza paLinkedIn. Daren anoziva nezve munhu wese ari munyika kubva kumakambani makuru ese. Iye anoshamisa network uye ane toni yehukama. Iye anoremekedzwa musoftware uye tekinoroji indasitiri uye mune ndiani ari wevatungamiriri vevatengesi. Iyo zvimwe kubatana, zvirinani mikana yekuti chimiro chake chionekwe.
Buzzfeed yakaita basa rakanaka re kuputsa nhamba uye nemazvo kushoropodza kwakazotevera kugovana kwakaitika kune pasocial web. Mushandirapamwe uyu waive shill… wainyengedza vanhu kuti vagovane chiratidzo cheLinkedIn - chinoonekwa zvakanyanya pakukurukurirana kuri kubuda.
Iyi ndiyo mhando yemushandirapamwe unondifambisa nzungu. Iyo muzana inhamba isina musoro isingareve chinhu… zvechokwadi hapana. Kana iwe uri superstar mumunda mako unosarudzika nezvekuti ndiani waunobatana naye paLinkedIn, hauna kuwana imwe yeemaemail. Asi kana iwe uri mune indasitiri ine inorema kutora vanhu ine hombe network ... uye iwe uri wakagwinya pabasa rako… iwe uchiri kugamuchira imwe yeaya maemail.
Mukurumbira unotukwa, zvibvumirano zvakaraswa… ingo taurira mumwe munhu ivo vakakosha saka vanozvigovana. Uye yakashanda zvisina mhosva.
Zvinondiyeuchidza imwe yemaT-shirts angu: Iwe unokosha. Kungofanana nevamwe vese.
Tags: simbaLinkedInlinkedin emailscging
Kukadzi 11, 2013 na5: 49 PM
Doug chidimbu chakanaka uye kufunga kunokanganisa zvisinei apo mushandirapamwe uyu uri shill - izvo zvainotarisira kuita kuti vanhu mune iyi 1% kana 5% kana 10% vafunge nezvayo - hmmm Ini zviri pachena kuti zvinonakidza kupfuura zvandaifunga - pamwe ndinoda kuziva kuti ndiani kutarisa nhoroondo yangu? Uye Ne $ 16 chete (kana kupfuura) - ndinogona kuziva.
Iva unonakidza kuziva kuti mangani emasaini ekusaina avakawana 🙂
Kukadzi 11, 2013 na11: 19 PM
Mubvunzo wakanaka, Duncan!
Kukadzi 11, 2013 na6: 07 PM
Ndatenda nekutarisa mune izvi. Yangu 5% yaifungira. Ini ndiri semi-anoshanda, asi hazvina kukwana kuti warandi kuve iyo yakakwira kumusoro. Duncan ane poindi yakanaka pazasi - ndinoshamisika kuti mangani maprimiyamu akatengeswa semhedzisiro?
Kukadzi 11, 2013 na6: 36 PM
Chinhu cheungwaru nezvazvo? Ini hapana chandakaziva nezvazvo kudzamara ndachiverenga pano Doug - shill kana kwete, yakashanda.
Kukadzi 12, 2013 na12: 18 PM
Kukadzi 12, 2013 na12: 43 PM
Ndine imwe mangwanani ano zvakare. Ini ndinofungidzira kuverengerwa padhuze nebasa rekutumira kunobatsira futi.
Douglas, yakanaka posvo. Pandakangowana iyo 5%, ndakafunga kuti "Ini ndiri mumwe mu10M… haina kunyanya kukosha.) Ini ndakabvuma kuigovana paLinkedIn (chete); asi ini handina kubhadhara iyo yekutanga sevhisi kuti uwane chero rumwe ruzivo. Pamwe iwe unofanirwa kushandisa chikamu chemashoko kuti uone kumwe kumwe kuita kwevanhu.
Kukadzi 12, 2013 na12: 48 PM
Mhedziso inogamuchirwa pamusoro pekuti mushandirapamwe wabudirira here kana kuti kwete. Kufungidzira kwangu ndekwekuti, nekuti chirauro uye chinja mameseji mameseji, hazvina kuita zvakanaka. Kunyangwe hazvo yakawana toni yekutarisisa.
Pfungwa dzangu chaidzo. Ndanzwa kuti kunyangwe mapurisa akamboita "akanaka mupurisa, akaipa mupurisa" maitiro panguva yekubvunzurudzwa anozviwira ivo pachavo. Saka zvaive neni uye yangu 5% mamaki kubva kuLinkedIn. Kunyangwe ndaiziva kuti yaive isingashamisike stat (ini handitore * iyo * yakawanda maonero) ini neimwe nzira ndainzwa ndakamanikidzwa kutumira tweet nezvazvo! Ndakazvidzora.
Kukadzi 12, 2013 na4: 49 PM
Ndiri munhu anoshanda paLinkedIn uye ndine chinangwa zvakare chekukura network yangu. Ini ndinofunga ruzivo rwunonzwisisika uye mushandirapamwe wekushambadzira ungwaru. Ndakangoti dai ndakazvifunga. Doug, une girazi iri hafu isina chinhu kuona pane izvi. Chingori chikafu chakanaka chekufunga… 1%, 5% kana 10% yemamiriyoni mazana maviri mapoka akakura kuti asungwe mukati, hongu. Asi zvakadaro, irwo ruzivo rwakagamuchirwa. Ini ndakatumira chiziviso changu… ndakafunga kuti zvakanaka. Uye seanofarira kushambadzira uye wekutengesa, ndinofarawo kuve chikamu chechero hutsva (uye hunonaka) kushambadzira kana kutengesa chirongwa. Uye chokwadi chinotaurirwa, ini ndinogona kunge ndakatumira zvinhu zvishoma zvaive zvisinganakidze kare Nhaurirano yawatanga nezve izvi ingori kushambadza kune simba kwakatangira pachiziviso cheLinkedIn chazvino kuenda kumaprofayiri epamusoro anoonekwa. Ndinofunga unogona kunge uchitamba chaimo mumaoko avo.
Ndinotenda maonero ako, hazvo, zvinogara zvichitonhorera kuona zvinhu nemaonero emumwe. Ndatenda nekutanga iyi hurukuro!
Great post. Ndakagamuchira email ichindiudza kuti ini ndaive mukati me5% uye ndakashamiswa - aya mapoinzi aienderana nezvandaifunga. Kunyange ini ndichinzwisisa kushambadzira kuseri kwayo, chokwadi chenyaya ndechekuti kuva akatendeseka kwakakosha pane kuyedza kuita kuti mushandisi anzwe kwese kudziya uye kusviba mukati.
Kukadzi 14, 2013 na6: 13 PM
Damn, Doug! Ini ndanga ndichingonzwa kukosha nezvangu.
Kukadzi 14, 2013 na6: 23 PM
@ facebook-1728428996: disqus Iwe uchiri wakakosha Mike! Kungofanana nevamwe vese 🙂
Kukadzi 18, 2013 na7: 16 PM
Iwe (neni) hatisi pakati pekutanga 1% yenhengo dzeLinkedIn.
Iwe uri mune 1% inonyanya kutaridzwa profiles pakati penhengo, dzakadzokororwa profiles, vanhu vakambopinda kamwechete uye vakanganwa nezvazvo, vanhu vakafa, vanyepedzeri, vanyengeri uye spammers.
Asi, isu tese hatina maturo saka takaigovana. Zvakanaka kwatiri!
Kukadzi 20, 2013 na1: 41 PM
Ida iyo t-shati. Inonyatsopfupikisa vezvenhau muna 2013.